Cycgba ígwè ọ dị njọ maka ọnọdụ? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Gba ọsọ igwe - ihe ngwọta dị irè
Gba ọsọ igwe - ihe ngwọta dị irè
Cycgba ígwè ọ dị njọ maka ọnọdụ?
Cygba ígwèna ịnọdụ ala abụghị otu;ịgba ígwèna-eme ka usoro obi na nke obi gị sie ike, ebe ịnọdụ ala na-ebibi ha abụọ. Nsogbu bụ naịgba ígwèna ịnọdụ ọdụ na-akpata nsogbu ahụ ike; a gbara gburugburu-na-atụpostcho, a 'rapaara' na nke siri ike na azụ na azụ siri ike (karịsịa hip flexors).Ọgọst 24 2016
Ọtụtụ mmadụ. Ekwenyesiri m ike na m lere ịnyịnya ígwè ma na-eche na ọ bụghị naanị na ọ ga-adị jụụ, mana ọ ga-abụkwara gị nsogbu. Know maara - Ọ na - akpata mmebi, ihe ngbu, ụfụ, na ụmụ nwoke, ikekwe nrụrụ erectile, ọrịa prostate, ikekwe ịnya igwe ma enweghị nsogbu ọ bụla.
Fọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eme ya. Enwere m, ya mere enwere m ike ịgwa gị na mgbe ihe mere na ọ na-echegbu onwe ya. Lee - nke a bụ 'chi m! My amụ amụ kpamkpam! 'Anyị ga-alaghachi na nke a ka anyị na-enyocha okwu metụtara ahụike ụmụ nwoke na ịgba ịnyịnya ígwè ha.
Iji mee nke a, anyị na otu n'ime ndị isi urologists UK - nwoke aha ya bụ Anthony Koupparis - jikọrọ aka - iji nye ndụmọdụ siri ike, nke bara uru nke ụmụ nwoke niile na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị ị toa ntị na mgbe ịchọrọ ihe kpatara ọzọ karịa ahụmịhe ahụike dị ukwuu iji kwenye ihe ọ sị na ya onwe ya bụkwa nwoke nwoke ndị ikom a na-anọkarị ọdụ n’elu ịnyịnya. Tupu anyi amalite, obu ihe omumu omumu. Nke ahụ bụ m otú m si agba ịnyịnya ígwè m.
Nke a bụ ugbu a ọkpọ na-agba ịnyịnya ígwè na na mere bụ ihe dị nso nke amụ.
Perineum nwekwara arịa ọbara buru ibu na akwara pudendal gị, nke na-enye mmetụta nke mpaghara ahụ ma yabụ na-enyekwa aka na ụlọ ahụ. N'elu perineum, ị nwere prostate gị, gland nke na-emepụta mmiri seminal na gafere urethra. N'iburu anatomi anyị na ọdịdị nke ihe ahụ, ọ dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji mee njikọ dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ihe mgbu ma ọ bụ nhụjuanya, nrụrụ erectile na nsogbu prostate, mana ka anyị leruo ya anya.
Ya mere, ọ bụ ụdị nke ịrahụ ụra n'ọnọdụ dị iche ma na-eteta na ogwe aka gị kpamkpam nwụrụ anwụ na ọ na-agwụ ike, mana mmetụta na-alaghachi ngwa ngwa na enweghị mmebi ogologo oge. Yiri nnọọ na nke ahụ dị mma. Ọ bụrụ na anyị na-arịa ọrịa ntị chiri mgbe anyị nyara ịnyịnya ígwè, gịnị bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke mbụ? Ọ bụrụ n'ịchọta na nke a ga-eme, banye igwe kwụ otu ebe na ọ ga-ada ụda mgbe e mesịrị.
Mgbe ahụ, isiokwu na-esote ga-abụ nrụrụ erectile na site na ihe anyị nụrụ banyere nro, enwere njikọ mgbe ahụ n'etiti ịgba ígwè, ọnụọgụ ugboro ugboro na-eduga na nrụrụ erectile? - azịza ya bụ mba. Ihe ka mkpa bụ mkpa ọ dị nrụrụ erectile na mbu. Usoro ndị na - eduga na nsogbu nrụrụ bụ otu ihe ahụ na usoro nke na - ebute ọrịa obi, nke na - eduga na nkụchi obi.
Achọrọ m ka m chọpụta nke a ụdị mmebi nke akwara ụbụrụ gị nke ga - eduga na nrụrụ erectile. Yabụ kedu ihe siri ike ime nke ahụ? Ọnwụ ahụ dị ịtụnanya na-emetụta perineum gị agaghị enye gị nrụrụ erectile. N'ezie, ọ gaghị enye gị nrụrụ erectile.
Ma, ọbụghị otu ọrịa kansa prostate si amalite, ọ bụkwa ajụjụ ma a na-enyocha gị maka ọrịa kansa prostate n'ụzọ na-ezighi ezi. Otu ihe anyị ji enye ihe ngosi nke ihe egwu nke ọrịa prostate bụ ịnwale ọbara ma enwere echiche na ọ bụrụ na ị gbaa okirikiri ọtụtụ ị nwere ike iwe iwe prostate gị na nke a nwere ike ịbụ nyocha ọbara gị nke a na-akpọ PSA nke a na-akpọ na-arụ ọrụ. ebuli ọbara ule a prostate kpọmkwem antigen ọbara ule na-erute n'ókè ị mere nke ahụ ọbara ule ọ na-artificially elu na mgbe ahụ ị nwere a dum ụyọkọ nke ule na ị dịghị mkpa n'ihi na ị na-ịnyịnya ígwè na nke ahụ abụghị eziokwu, ọ bụghị ya - enwere O nwere ike ịbụ na ọ ga-emetụta ntakịrị, mana ọ bụrụ na ị lelee nyocha nyocha nke ụlọ nyocha na ọtụtụ, ọtụtụ akara nrịba ama dị na ala maka ọrịa kansa prostate, ịgba ígwè na mmega ahụ enweghị ihe dị iche na nke ọ bụla na-egosi ọrịa kansa prostate, yabụ ịgba ịnyịnya ígwè dị mma , ọ na - eme ka ahụ ike gị n'ihe niile na - ebelata ọrịa gị nke kansa na ọ naghị emetụta nyocha ọrịa kansa prostate na - ekwesịghị ekwesị. Ma na ọ na-aga n'ihu.
N'ụzọ dị mma, ọ dịghị nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate. Ihe anyị kwesịrị ime dị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere ya. Yabụ ka anyị na-etolite, ohere nke ịrịa ọrịa cancer prostate dị elu.
Ihe mbu ikwesiri ime ugbua bu ima ihe ufodu ihe mgbaàmà bu ugbua, ihe ndi anyi n’ele anya bu ihe dika ihe mgbaàmà banyere oru mmiri, mgbu azu, nsogbu igba obara n’ime mmiri, udi ihe ndia, ma oburu n’ichegbu onwe gi. ihe ndị a, ọ bụrụ na ị hụ ihe ndị a ọzọ Mgbe ahụ ị ga-agakwuru onye urologist ma ọ bụ dọkịta ezinụlọ gị ma nwee mkparịta ụka dabara adaba banyere nyocha ahụ. Ọ pụtaghị na a ga-enyocha gị maka ọrịa cancer prostate, mana dọkịta ahụ ga - ejegharị gị site na ihe ọma nke ule ahụ na ikekwe nyocha nke ule ahụ. Unu abụọ ga-ekpebizi ma ọ̀ ga-eme ka ọ ghara ịga n’ihu.
Achọghị m ka ụmụ okorobịa leghara ya anya na nke mbụ. Maka ọtụtụ akụkụ, anyị na-achọta ihe ndị a tupu ụbọchị ndị a ma enwere ike ịhazi ya kpamkpam. Kedu afọ anyị na-ekwu maka ebe a? Kedu afọ ị kwesịrị ichegbu onwe gị? Enwere m ekele na enwere ike bụrụ ihe atụ dị egwu nke ị maara, ikpe mbụ, mana ị ziri ezi.
Ya mere, na nke m na omume m, enwere m foto gbagọrọ agbagọ. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọrụ dị otú a na ị ga-enwe ndị ọrịa site na 30 ruo 80 na 90s na-eche banyere ya, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà ọ bụla na-echegbu onwe gị, atụla ụjọ, tinye isi na ájá ma duzie nwee mkparịta ụka kwesịrị ekwesị na nyocha nke ihe bụ nsogbu bụ, ọ bụrụ na enwere akara uhie ọ bụla iji mee ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha Yabụ enweghị njikọ dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ọrịa prostate, mana ọrịa prostate bụ nnukwu ihe maka nnukwu akụkụ nke ndị ọgba tum tum Nsogbu naanị n'ihi na ha bụ ụmụ nwoke, ha emeela agadi, ya mere, ha kwesịrị ichebara ya echiche. Amaghị m gbasara gị mana ihe m ga-eji wepụ mkparịta ụka a ya na Anthony bụ na anyị nwere ike ghara iji ahụike anyị gwurie egwu. Anyị kwesịrị ịnwụ ọnwụ nke aka anyị ma chọọ enyemaka mgbe anyị chọrọ ya n'ihi na anyị enwetaghị akpụkpọ ahụ nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu anyị ga-eche ihu.
Kedu ihe ziri ezi ịgba ịnyịnya ígwè?
Kọmitii United States na-ekwusi ike naezigbo nguzo igwe kwụ otu ebegụnyere ihe karịrị nanị ịnọdụ ala ọtọ. E kwesịrị inwe obere nrụgide na aka, na elu ahụ ga-agbatị ntakịrị ihu. Ọzọkwa, ọnọdụ gị kwesịrị inwe ahụ iru ala na mmiri mmiri.11 june Dec 2019
Ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ n’ịgba ịnyịnya ígwè, ikekwe ị rụpụtara ụfọdụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọnọdụ niile dịịrị gị n’elu igwe kwụ otu ebe, mana ịmara mgbe ị ga-eji ha bụ okwu ọzọ banyere ọnọdụ ndị dị mkpa n’elu gị ka ị jiri ebe a. Dị ka nke a ebe ị na-etinye oge ka ukwuu n'ime oge ịnya ịnyịnya gị na n'ọdụ ụgbọ mmiri, nke dị mma maka ịrịgo dị mkpirikpi na osooso ka ị nọ ọdụ Keepdebe aka gị na njikwa na ihe mkpuchi breeki ebe a ebe ị na-etinye oge ka ukwuu n'ime ya bụ ezigbo Nchikota nke nkasi obi n'ihi na ahụ gị ziri ezi ma na-achịkwa n'ihi na ị nwere ike ịme breeki dị mfe site na ebe a ma gbanwee njikwa aka ebe a bụkwa ọnọdụ kachasị mma nke sadulu ahụ, karịsịa mgbe ị na-arịgo, ọ bụ ugbu a ọ bụghị nke ọma dị ka ijide ya sadulu oge maka obere bumps, ma eleghị anya, naanị iji gbatịa akpịrị uru ahụ, ma mgbe ị ga-adọgbu onwe gị ntakịrị ihe p ị ka nwere ike brek ị ka nwere ike ịgbanwee Kwadobe ma ọ bụrụ na ị inupụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ị nwere ike sere na njikwa maka kacha forc e ugbu a mgbe ị na-eji pedals na-adịghị pịa yana ịkwanye ụkwụ gị elu, n'ihi na nke ahụ na-enyere gị aka itinye ike na-abaghị uru na njikwa ahụ na-arịgo aka gị ebe a na Drops na-enye gị njikwa kachasị na igwe kwụ otu ebe gị, ị nwere ike ịkụ braki na ike kasịnụ na aka gị nọ n'ọnọdụ dị mma nke ukwuu ka ha wee ghara ịdaba na bumps, yabụ nke a bụ ọnọdụ kachasị mma mgbe ị na-arịda ma ọ bụ na-eme ngwa ngwa na-eme ka ị nwekwuo ikuku na ọ dị mfe ịga otu ọsọ ma ọ bụ ọbụlagodi ngwa ngwa, ngwa ngwa ị na-aga, otú ahụ ka ikuku ga-abụ ụkwụ gị, ọ ga-abụ na ị ga-efunahụ ike, nke m ga-azụrịrị maka ikuku. Ọnọdụ a nwekwara ike ịfefe ngwa ngwa na ịnyịnya site na sadulu ngwa ngwa, ọkachasị mgbe ịgba ọsọ na-ejide tụlee jide ubu gị ala n'ihu igwe kwụ otu ebe, ị nwekwara ike ịkwụsị n'ụzọ ziri ezi na njikwa aka na-akachasị ike ihe ikpeazụ nke ịnya na dropscan n'ezie na-enyere aka mgbe ị na-agbada n'akụkụ mmiri ndọda gị dị ala ma na-enyere aka kesaa ibu gị na igwe kwụ otu ebe ugbu a ị chọghị oke ibu na wiil dị n'ihu ọ dị mma ịnwe ihe iji melite njigide ọnọdụ ikpeazụ gị na-ejide n'elu na Ijigide aka ahụ ebe a na-etinye gị n'ọnọdụ kachasị ziri ezi anyị anaghị atụ aro maka ogologo oge, na-arịgo elu n'ihi na ị nọ n'ebe dị anya site na brek gị na gia gị. Hụ otu njikwa ị nwere igwe kwụ otu ebe, ọ bụ obere obere, mana mgbe ị nwere ọmarịcha ogologo, ịrịgogo elu ọ na-adị mma, ịnwere ike ịnọdụ ala na oche ahụ, zuru ike ntakịrị, mepee ngụgụ gị, lekwasị anya na ịgbagharị ugbu a ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị ga-esi na ya pụọ ​​na sadulu na ọnọdụ a naanị iji nye akwara gị ike ịgbatị m ga-atụ aro itinye aka gị azụ n'elu hoods mgbe ị na-apụ igwe kwụ otu ebe n'elu nwere ike ịnya ịnyịnya kama ọ bụ na-ejighị n'aka na dị ka onye nzuzu, oge ị na-etinye na igwe kwụ otu ebe, ọ ga-adịrị gị mfe karị ịchọta ya ma gbanwee ọnọdụ, ọkachasị na aka gị ma ọ ga-abụ ọdịdị nke abụọ, ọ dịkwa mma ịmara na ọ nweghị ụzọ dị egwu megharia aka gi n’elu ogba okpu agha Simon n’uche ma oburu na udiri iru nwatakiri a masoro gi, pinye aka n’ime Mad
Cycgba ígwè ọ na-eme ka ọnọdụ azụ dị mma?
Na mgbakwunye na uru ikuku, uru ya bụ physiological. “Ndị hunched-n'eluọnọdụ igwe kwụ otu ebena-etinye ọkpụkpụ azụ na pelvis onye na-agba ọsọ na nke kachasị mmaọnọdụmaka nrụpụta ike site na nnukwu akwara musculature siri ike, ”ka Sapp na-ekwu.Jenụwarị 24. Dec 2019
Cycgba ígwè kwa ụbọchị ọ dị njọ?
Na-agba ịnyịnya ígwè kwa ụbọchịỌ dị mma ma ọ bụrụ na ịmee ya n'ụzọ siri ike ma ọ bụrụ na ahụ gị nwere oge zuru oke iji gbakee. Asọmpindị na-agba ígwèchọrọ mgbake ụbọchị nyere osisi ike nke ha ọzụzụ na agbụrụ, mgbe ihe nkịtịndị na-agba ígwènwere ike okirikiri n'emeghị ụbọchị.Eprel 26 2021
Linggba ígwè kwa ụbọchị karịrị akarị?
Mgbe ọ na-emerụ ịnya ịnyịnyakwa ụbọchị? Na-agba ịnyịnya gịigwe kwụ otu ebe kwa ụbọchịna ike kachasị na ogologo oge n’enweghị ezumike ọ bụla ga-emerụ gị ahụ karịa mma. Nwere ike ime ka ọ dị njọ site na ịlele nri gị, hydration na enweghị ụra zuru ezu.Eprel 26 2021
Cycgba ígwè ọ dị njọ n'olu gị?
Ọ bụrụị na-na-agba n'okporo ụzọigwe kwụ otu ebe,nke giisi dị elu, nke nwere ike ime ka ọrịa ogbu na nkwonkwo ka njọn'olu, mepụta irighiri akwara ma nye aka na stenosis spinal.Ọgọst 6 2015
Bikgba ígwè ọ dị mma maka ọnọdụ gị?
10. Mma nguzozipostcho, na nhazi. Ka ị kwụsie ikenke giahụ ma debeigwe kwụ otu ebe gịziri ezi, ị ga-akawanye mmanke gimkpokọta nhazi, nhazi, napostcho.bọchị 2020
Nwere ike ịnya ịnyịnya ibu na postcho?
Ka mmaỌnọdụna Nchikota
N'agbanyeghịịgba ígwè na-emeỌ bụghị gụnyere gị ka ị kwụ ọtọ na ubu gị azụ, ọ bụ n'ezie nnukwu ụzọmelitenke gipostcho. Mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè, a na-amanye gị idebe azụ gị, zere ịsụ ure ọ bụla.
arụ ọrụ sekit ab
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-adọrọ mmasị?
Ọ bụ sayensị:Ndị na-agba ịnyịnya ígwèdịna-ekpo ọkụ. Otu nnyocha e mere n’oge na-adịbeghị anya gosiri nandị na-agba ígwèndị toro eto na Tour de France na-ahụta karịamara mmakarịa ndị ọzọ na-eme egwuregwu - na nke kacha elu 10 pasent nkendị na-agba ígwè'Dị ihe dị ka pasent 25 ọzọmara mmakarịa pasent 10 nke kasị ala. ” Eleghi anya ngwa ngwa bụ ọgaranya ọhụrụ?Ndị na-agba ịnyịnya ígwèdị mma.Eprel 10 2014
Cycgba ígwè ọ dị njọ maka ikpere?
Gịnị kpataraCygba ígwèỌ Dị Mma Maka GịNkwonkwo
'Cygba ígwèbụ ihe omume dị ala, ”ka Shroyer na-ekwu. Nke a pụtara naịgba ígwèna-egbochi nrụgide na-ebu ibunkwonkwo, dị ka hips gị,ikpere, na ụkwụ. Na mgbakwunye, mmegharị ahụ na-enyere aka mmanunkwonkwo, nke na-ebelata ihe mgbu na nkwesi ike.10 jul. Dec 2019
Kedu ka esi emeziwanye ọnọdụ gị na igwe kwụ otu ebe?
Ihu Igwe Igbazi Izizi 1. Nọgide na-enwe ọnọdụ ịgba ígwè nke ziri ezi nwere ike ime mgbanwe dị iche iche ma a bịa n'ihe ị na-eche mgbe ịnyachara njem dị anya. 2 Nweta Eke Igwe kwụ ọtọ. Dị nnọọ ka ọ dị mkpa ka ịnwe ọnọdụ ziri ezi bụ ịnwe igwe kwụ otu ebe dabara adaba. 3 3 Cygba Ọga Mgbatị.
Kedu ọnọdụ ziri ezi maka ịgba ígwè?
Pelvis kwesịrị ịnọpụ iche, ụkwụ na-agbago ma na-agbada site na nkwonkwo hip, ikpere na-agbatị ma na-agbatị. Ubu kwesiri ibu ala na ubu ubu eweghachite na azu. Iji nyere aka na ọnọdụ a, ị nwere ike iche ịgbanye ikpere aka gị na ikpere gị ma jiri nwayọ na-adọkpụ aka gị, dị ka a ga - asị na ị na - achọ imebi ha na ọkara.
Gini kwesiri ka aru gi di n’elu igwe?
Mgbe ị nwesịrị ịnyịnya ígwè ọkachamara, ọnọdụ ahụ kwesịrị ekwesị na-abụkarị ihe ọzọ anyị ga-ele anya mgbe anyị na-achọpụta ihe mgbu mgbe anyị na-agba ịnyịnya. Ọ nwere ike ịdị ka ọ dị mfe, mana ichetara onwe gị ka izu ike gị mgbe ị na-anọ ogologo njem ma ọ bụ mbọ siri ike nwere ike ịzọpụta gị pụọ na olu mgbu na-adịghị mma n'echi ya. Kedu ihe bụ ezigbo nnọpụiche n'okporo ụzọ?